Manni maree paartilee mormituu (caucus) hundeeffame. - Oromia Shall be Free
Oduu Ubuntu Amajji 28 bara 2014
Paartileen siyaasaa mormituu 10 ta’an adeemsa fooramii marii biyyaalessaa irratti komii bu’uuraa qabna jedhan.
“Marii biyyoolessaa sirna dimokiraasii dhugaa ta’e dhiyeessu gochuuf Caucus hundeessineerra” jechuun ibsa har’a miidiyaaleef kennaniin beeksisaniiru.
Marii biyyoolessaa akkamitti gaggeessuun danda’amu irratti falmiin gaggeeffamaa kan ture yoo ta’u, mootummaan seera diraaftii adeemsa to’atu qopheessee gaaffilee fi yaadota paartilee siyaasaa mirkaneessuu isaa ibsi paartilee kanaa beeksisee jira. e yaadonni paartilee siyaasaas “danda’ameera” the Filannoo komishinarootaa.
Ibsa paarlaamaan paartilee hidhatanii gara mariitti affeeruuf dhagaan bu’uuraa kaa’ame hin jiru jedhee kan dhorke, Caucus haaraa Kulm keessatti.
Mootummaafis yaada hedduu dhiyeesseera.
Yaadota irratti immoo :-
Dhukaasni hatattamaa dhaabbilee idil-addunyaatiin to’atame kutaalee Itoophiyaa hunda keessatti ka’uu qaba.
-Komishinii gorsaa irra deebiin hundeessuu fi komishinaroota haala naamusa qabuun filachuuf.
– Ajandaan marii karaa hunda hirmaachiseen galmaa’uu qaba.
Mariiwwan kan gaggeeffamuu qabu bakka ilaaltonni idil-addunyaa argamanitti.
Inni quuqama qaba.
Paartileen mana maree hundeessanis
2- Tokkummaa Itoophiyaa
3- Paartii ummata affaar
4- Paartii haqaa fi dimokiraasii Affaar
5-Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)
6- Koongirasii Federaalawaa Oromoo
7- Adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen
8-Sochii biyyoolessaa Walaaytaa
9- Arena Tigray
10-Doongaa dhaabbata dimokiraatawaa ummataa
ta’uu isaanii ibsameera.
Obbo Musa Adem hogganaa paartii ummata affaar fi dura taa’aa filatamaa paarlaamaa ta’uun miidiyaa keenyaaf ibsanii jiru.
“Paartileen dhimmoota adda addaa irratti ilaalcha garagaraa qabaatanillee mariin biyyoolessaa karaa dhugaa ta’een akka gaggeeffamu ejjannoo wal fakkaata qabu. Kanaafi kan isaan maree alternative ta’e dhaabuuf murteessan”
Ubuntu madda ishee ji’oota dura kaastee “pilaatfoormiin marii paartii siyaasaa” hundeeffamuu akka danda’u gabaaftee turte.
Previous “Oromiyaan Guantanamo taatee jirti”
Next Ibsa Gamtaa Paartilee Mormitootaa Irraa Kenname